License Plate Reverse Kamera, License Frame Backup Kamera, Wired License Frame Backup Kamera Vagadziri uye Vanotengesa muChina
Shenzhen Sunveytech Co.,LTD [Guangdong,China] Business Type:Manufacturer Main Markets: Americas , Europe , Worldwide Exporter:71% - 80% Certs:CE, FCC, RoHS Tsanangudzo:License Plate Reverse Kamera,License Frame Backup Kamera,Wired rezinesi reChimiro Backup Kamera,Yakatakurwa License Yenhare Backup Kamera,,
Home > Products > Mota Backup Kamera > License Frame Backup Kamera
Zvigadzirwa zve License Frame Backup Kamera , isu tiri vashandi vanobva kuChina, License Plate Reverse Kamera , License Frame Backup Kamera vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Wired rezinesi reChimiro Backup Kamera R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Mutengo: SVT CAM
Packaging: 50pcs pakatoni, 28kg / katoni. Neutral bhokisi kana yakasarudzika ruvara bhokisi
License Plate Backup Kamera ine Night Vision Husiku Vision Mvura isina kudzora Kamera / Parking Kamera / Rekupedzisira Reya Kamera
Kupa Mazano: 150000pcs/Month
Ukuru hwekugara kweiyo rezenisi chitupa bhaidhi kamera yakagadzirirwa muEuropean mota dhiza uye yakanyatsobatanidzwa nemotokari yako. 4 infrared maLED anodzosera bhaisikopo kamera anoratidza echokwadi ruvara masikati uye yakajeka chiratidzo usiku. Backup kamera yakazara isina mvura ine chiyero IP68. Yakagadzirwa uye...
Ukuru hwekugara kweiyo rezenisi chitupa bhaidhi kamera yakagadzirirwa muEuropean mota dhiza uye yakanyatsobatanidzwa nemotokari yako. Reverse backup kamera inoratidza yechokwadi ruvara masikati uye yakajeka chiratidzo usiku. Backup kamera yakazara isina mvura ine chiyero IP68. Yakagadzirwa uye kuyedzwa mamiriro ekunze...
Stylish inorema-basa chrome kana dema yakazara chimiro girazi bhatiri kamera ine 8 Leds IR husiku maonero; Lens angle mumuviri inogadziriswa pane kamera. Yakakosha simbi kesi yakagadzirirwa Backup kamera yeUS mota rezinesi furemu yakaiswa. Kuiswa Nyore: Hapana chikonzero chekuchera maburi ekuisa bracket. Yakasarudzika...
China License Frame Backup Kamera Vatengi
Yakakwana kune ese mota dzinoshandisa yakajairika US EU rezenisi peturu, kona yekhamera inogona kugadziriswa makumi matanhatu nemasereji akasununguka.
[Yakashongedzwa ne4 6 8 Night Vision infrared LEDs sarudzo] inowedzera kuoneka mune yakaderera mwenje mamiriro, kuve nechokwadi chekuchengetedzeka kwakazara kunyangwe pane rima rakazara.
[100% Mvura isina mvura & Yakaderera mashandisiro esimba] Mvura isina IP68 Chiyero uye Inoshandisa isingasviki makumi mana mA.Ichokwadi ine hupenyu hwakareba hwekushumirwa.
[Kureba kweaya waya ndeye 32 ft] Iyo yakanakira mota zhinji neSUV RV PICKUP, Easy kuisa
[Yakavimbika & Inoshamwaridzana Mutengi Service] Yakagadzirira kupindura mukati meawa makumi maviri nemana yenguva. 30-Day Mari Kudzoserwa Guarantee, 12 Month Replacement Warranty uye Hupenyu hwekutsigira Guarantee
Wired rezinesi reChimiro Backup Kamera
Yakatakurwa License Yenhare Backup Kamera
License Plate Kamera